Samsung nwere ike ịkwalite mwepụta nke Galaxy S8 iji mechie nsogbu nke Galaxy Note 7 | Akụkọ akụrụngwa
Usoro okporo ụzọ Samsung gụnyere ngosipụta nke ọkọlọtọ ya na ntụaka ya n'ahịa ekwentị mkpanaaka n'oge Mobile World Congress nke a na-eme kwa afọ na Barcelona. The Galaxy S6 ma ọ bụ Galaxy S7 ihu bụ ụfọdụ n'ime ọnụ ndị e gosipụtara n'ihu ọha na ihe omume Barcelona, ​​mana Galaxy S8 Enwere m ike ịhapụ nhọpụta a oge mbụ na ogologo oge.
Nke a bụ na ụlọ ọrụ South Korea, nsogbu nke Galaxy Note 7 na-agbawa na-enweghị ọkwa mbụ n'ihi ọdịda batrị, nwere ike ịme Ihe ngosi nke ohuru Galaxy S8 ga-aga n’ihu n’oge iji nye ndi ozo ndi ozo n’achoghi ihe ohuru a. ma ọ bụ na ha adịghị anwa anwa inweta ya.
A naghị ere ahịa nke Galaxy Note 7 dị ka atụ anya ya, tumadi n'ihi na ọ bụ naanị ụbọchị ole na ole ka e rere ya ruo mgbe Samsung wepụrụ ya n'ahịa ahụ iji gbalịa idozi nsogbu ndị pụtara. Mwepụta nke Galaxy S8 ọhụrụ ga-eme ka ahịa Samsung dị ngwa ma nyere ya aka ịgbake site na nsogbu ọ na-enwe ugbu a n'ihi nsogbu ndị na-emetụta otu n'ime ọdụ kpakpando ya.
Ugbu a ihe a niile bụ naanị asịrị, nke ahụ yiri ka ọ na-ada ụdaỌ bụ ezie na anyị ga-ebu ụzọ mara ma Samsung ọ nwere ike idozi nsogbu nke Galaxy Note 7 yana ọ bụrụ na ọ kwesịrị ịtụ anya mwepụta nke Galaxy S8 iji pụọ na nsogbu ahụ ma weghachite ọnụ ọgụgụ ahịa ahịa.
Ì chere na Samsung ga-ebute mbido nke Galaxy S8 iji kwụsị ma kpuchie nsogbu ahụ ihe mgbawa nke Galaxy Note 7 mepụtara?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung nwere ike ịkwalite mmalite nke Galaxy S8 iji mechie nsogbu nke Galaxy Note 7